Bangiyada HD fiidiyowyada aan boqornimada lahayn (I) | Abuurista khadka tooska ah
Fiidiyowgu wuxuu naga siinayaa firfircoonaan weyn shaqadeena. Websaydhyada, xayaysiisyada, fiidiyowyada fiidiyowga ah, fiidiyowga shirkadaha ... Isticmaalka aan ku siin karno fiidiyowgu waa mid aan xad lahayn. Guud ahaan, marka laga shaqeynayo mashruucan noocan ah, waa wax caqli gal ah oo caadi u ah abuurayaashu inay duubaan ama abuuraan inta badan waxyaabaha ku jira. Si kastaba ha noqotee waxaa jira marar badan markii waxaan u baahanahay inaan u adeegsanno bangiga fiidiyowga leh gabi ahaanba tayo xirfadeed, ama by khaladaadka isku imaatinka iyo dhacdooyinka lama filaanka ah, ama by awood u lahayn inuu fuliyo toogasho.
Taasi waa sababta aan u soo jeediyo shan bangi oo fiidiyoowyo mihnadeed ah iyo gudaha HD iyo HD tayo sare leh, si aad u tixgeliso iyaga markaad ka shaqeyneyso fikradaha noocan ah. Sikastaba, qoraalada dambe waan sii wadi doonaa xulitaankan laakiin hadaad tixgaliso inaan ka tagay badal muhiim ah, waad ogtahay ... Faallo!
Fotolia: Xulashadaan ayaa koox kooxeedyo ah, fiidiyowyo, sawirro iyo astaamo gabi ahaanba tayo xirfadeed leh oo qiimahoodu yahay 0,74 XNUMX halkii deyn ahaan marka la eego fiidiyowyada. Dhamaan fiidiyowyada kujira buuggaaga buuggu waa boqortooyo-la'aan waxaana lagu dari karaa shaqooyinkeenna hab gebi ahaanba bilaash ah oo aan lahayn waqti ama xaddid kale, mar alla markii aannu iibsanno iyagu waa gebi ahaanba innaga.
Youtube Channel: Waxaan kala soo bixi karnaa fiidiyowyo tayo sare leh (qaab 1080) ah isla markaana gabi ahaanba waa lacag la’aan. Way kugu habboon tahay haddii aad raadineyso natiijo xirfad-yaqaan ah oo aad xiiseyneyso inaad kula shaqeyso dabeecadda iyo fiidiyowyada muuqaalka ah. Maaddaama ay tahay meel daciif ah, waa in la sheegaa inaysan haysan buugga weyn in kastoo dhinaca kale aysan u baahnayn nooc diiwaangelin ah oo ay ku soo dejisan karaan fiidiyowyada.
Shutterstock: Waxay isu keentaa sawirro, vektoryo, sawirro, muusig iyo fiidiyoow. Waxay noo soo bandhigeysaa ku dhowaad laba milyan oo fiidiyow oo gebi ahaanba tayo xirfadeed leh, oo noo oggolaanaya inaan soo dejino muunad bilaash ah waxayna sidoo kale na siinaysaa suurtagalnimada inaan ku iibsanno fiidiyowga tayada kala duwan. Qiimaha dabcan way kala duwan yihiin iyadoo kuxiran tayada iyo muddada. Si aan fikrad kaa siino, fiidiyaha websaydhka ah wuxuu ku kici karaa qiyaastii € 19, mid ka mid ah tayada SD ee 39, tayada HD 59 iyo tayada 4K oo ah 229. Waxay u baahan tahay diiwaangelin waxayna na siisaa buug-yare ballaaran oo aan kala dooran karno.
123RF: Waa bangi aad u weyn oo ay ku jiraan sawiro, video, maqal iyo vector. Waxay u baahan tahay diiwaangelin waxayna bixisaa dhowr nooc oo fiidiyow ah marka la eego qiimaha. Mid ka mid ah xooggeeda ayaa ah inay bixiso qorshooyin kala duwan oo ku saleysan baahida isticmaalaha. Waxaan ku iibsan karnaa qorshe adeegsi maalinle ah, nidaamka deynta ama xirmooyinka soo dejinta. Mid kasta oo ka mid ah xulashooyinkani wuxuu bixiyaa beddelaado kala duwan.
Bangiga Maqalka: Waxaan ka heli doonnaa sawirro, fiidiyow iyo dhawaq labadaba qaab bilaash ah iyo mid heer sare ah. Waxay na siisaa noocyo badan oo kala duwan inkastoo xaqiiqda ah in kaliya 5% ee sanduuqa faylka la muujiyay. Haddii ay dhacdo inaan la helin waxa aan raadineyno, marwalba waan la xiriiri karnaa maamulayaasha bogga si ay dib ugu eegaan lacagta oo dhan. Waxay u taagan tahay sida ugu wanaagsan ee loo kala saaray faylalka, iyaga oo na siinaya feyl faahfaahsan oo mid kasta oo iyaga ka mid ah, oo ay ku jiraan waqtiga, goobta juquraafi ahaan, qaabka, saamiga dhinaca ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » HD bangiyada video stock (I)
Su'aal, dhammaan sawirada, fiidiyowyada iyo maqalka dhammaan bogagga aad halkan ku soo bandhigeyso waa kuwo xor ka ah xuquuqda daabacaadda?